स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुलापत्र ! | Kendrabindu Nepal Online News
१५ चैत्र २०७६, शनिबार २१:२०
आदरणीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ज्यु,
मेरो नमस्कार ।
हुन त हिजो आज तपाईं धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ । कोरोना कहरले विश्वलाई नै गाजेका बेलामा ‘ग्रीन जोन’मा छौं भनेर दंगिएका हामी एकाएक संक्रमित देखा पर्न थालेपछि अत्तालिएको स्थिती छ । सबै नेपाली अत्तालिएको परिस्थितीमा तपाई त झन् स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सम्हालेको माननीय मन्त्रीज्यु । जिम्मेवारी सबै टाउकोमा थुप्रिएको छ । ठूला स्रोत साधन भएका मुलुकले हात उठाइरहेको यो बेलामा सिमित स्रोत साधनबाट कोरोना संकट टार्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईंमा आएको छ । एकातर्फ कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा अर्को तर्फ तपाईंलाई अक्षम भनेर सामाजिक सन्जाल तताइएको छ ।
लकडाउनका कारण तपाईका घरका पाहुना पनि फर्किएका छैनन् होला । तिनीहरुका आफ्नै किचकिच होलान् । डब्लुएचओ, टेकु, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, कोभिड १९, कोरोना जस्ता शब्द कानमा गुन्जिदा पनि मर्नु जस्तो हुन्छ होला । मैले मानवीय हिसाबले तपाईंको पीडा अवश्य अनुभुत गरेको छु । यद्यपी फुर्सद भयो भनें यो पत्र पढिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु । यो पत्रले तपाईंलाई अगाडि बढ्न अलिकती पनि सहयोग मिलेको महसुस गर्नुभयो भने म धन्य हुनेछु।
हुन त लामो समय राजनीति गरेर समय बिताउनु भएको तपाईंलाई कुनै पनि काम गर्न नआउने भन्ने हुनै सक्दैन । तर, कहिलेकाहीँ अवस्था कस्तो भइदिन्छ भने कुनै कुनै प्रश्नको जवाफ मान्छेलाई मनमा थाहा हुन्छ तर त्यसलाई मुखमा ल्याएर व्यक्त गर्न सकिँदैन ।
प्रसङ्ग तपाईं तर्फ नै जोडौं । कानुन मन्त्रालय सम्हालेर आनन्दले बसिरहेको तपाईंलाई कुन दिनमा यो ‘काउसो’ आइलागेछ र स्वास्थ्य मन्त्रालय हुत्तिनो भयो । विश्वभर महामारीको रुपमा आतंक मच्चाइरहेको कोरोना आउने बेलामै तपाईं स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नुपर्ने कतै तपाइको दुर्भाग्य पो थियो कि, एकपटक जोखाना हेर्नुपर्थ्यो । अहिले कम्तीमा कानुन मन्त्रालयमै रहिरहेको भए सायद यो लफडा त झेल्नुपर्ने थिएन । विद्यार्थी आन्दोलन र पार्टीको गुटगत राजनीतिको अभ्यासमा माहिर भएपनि एकैपटक संसदीय राजनीतिमा आएर क्याबिनेट मन्त्री बनेकाले सरकारी कामकाजको अभ्यास नजान्दै बोक्न नै गाह्रो हुने अभिभारा तपाईंमा आइदिएको आम विश्लेषण हुन थालेको छ ।
हुनत राजनीतिमा कम बोलेर भलादमीको परिचय बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंको मान्यता होला । सायद त्यही भएर कोरोनाको बारेमा प्रश्न गर्ने पत्रकारसँग तपाईंले बोल्न चाहनु भएन । प्रश्न गरिरहेपछि ‘घरमा पाहुना आएका छन् त्यसैले मैले अहिले बोल्न सक्दिन भन्नुभयो’ । तपाईंको मौनता गलत छैन मन्त्री ज्यु । बाँकी अरु सबै मन्त्री बोले पनि तपाईं कम नै बोलिराख्नु भएको छ । यही राम्रो छ । धेरै बोल्नेको हविगत के हुन्छ देखिसकियो । तपाईंलाई पनि मौन बसेको सुहाउँछ । किनभने तपाईं बोल्नुभयो भने बोल्ने भनेको ‘अन्टसन्ट’ मात्र रहेछ । ‘अन्टसन्ट’ बोल्नु भन्दा नबोलेको नै जाती हुन्छ।
पत्रकारले प्रश्न सोध्दा नबोल्ने नै हो भने तपाईं पूर्ण रूपमा चुप हुनु पर्ने थियो । हेर्नुस् त एकमात्र वाक्य बिना प्रसङ्गको बोल्नाले तपाईंका घरमा आएका पाहुना अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनिरहेका छन् । मजाकको पात्र बनाइएका छन् र यो क्रम लामै समय चल्ने निश्चित छ ।
त्यति मात्र होइन, कोरोना नियन्त्रण समितिको बैठकमा तपाईंले बोलेको भिडियो बाहिर आयो । ‘पिपीई’ भनेको के हो मलाई त्यति थाहा थिएन भनेर तपाईंले भनिरहँदा करोडौँ नेपालीले आफ्नो मन्त्रीको योग्यता बारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । पत्रपत्रिकामा राम्रा र ठुला मानिने पत्रिकाका सम्पादकले त्यस बारेमा सम्पादकीय नै लेखे । देशसँगै स्वास्थ्य मन्त्रीको जिब्रोमा पनि ‘लक डाउन’ गरौँ भनेर सोझै तपाईंको अपमान हुने गरी लेख्न पाएको मौका कसैले किन छोड्थे । त्यो कुराको समेत ‘ट्रोल’ बन्यो । कति जनताले तपाईंको जिब्रो बाहिर निस्केर त्यसमा चाबी लगाइएका कार्टुन सेयर गरेर मनोरञ्जन लिए ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्चीमा बसेपछि ‘पिपीई’ के हो मलाई थाहा थिएन भनेर तपाईंले बोल्न पाउनुहुन्न । स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्ची सम्हाल्ने भएपछि डाक्टर जत्तिकै विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर कमसेकम कोरोनाबारे देशदुनियाँ भरी आतंक मच्चिएका बेला पिपीई, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन, सिटामोल, अपरेसन थिएटर, अस्पतालको लागि खरिद हुने मेसिन र ‘सिस्टम’ चल्ने ‘मेकानिजम’ को बारेमा तपाईंले बुझेकै हुनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्दै गर्दा यो क्षेत्र बुझ्ने कुनै चिकित्सक वा सम्बन्धित विज्ञ सल्लाहकार टिममा राख्नुपर्छ भनेर सोच्नै पथ्र्यो । सचिव समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ नभएको अवस्था र यत्रो ‘पेन्डेमीक’ महामारी चल्दा एउटा विशेष संयन्त्र राख्नै पर्थ्यो । कि त यस्ता कमजोरी सार्वजनिक हुनसक्ने ठाऊँमा बोल्नै हुदैन थियो ।
कोरोना बारे किन पढ्नु भएन स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू? किन अल्छी गर्नुभयो, आजसम्म ‘पिपीई’ को बारेमा थाहा पाउन किन ढिलो ? सामाजिक सञ्जालमा नियमित सक्रिय हुने जो कोहीले बुझिसकेको कुरा तपाईंले मात्र कसरी बुझ्नु भएन ? फेरि दैनिक डाक्टर–नर्स अस्पताल–औषधि लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सयौँ फाइल सदर गर्ने मान्छे तपाईंले त्यति महत्वपूर्ण कुरो समेत मलाइ थाहै थिएन भनेर फितलो हुन सुहाउने कुरा थियो र ?
हुन त कसले गर्भबाटै सिकेर आउँछ र ? सिक्दै छन् हाम्रा मन्त्री भनेर हजुरका समर्थकहरू भर्खरै सक्रिय हुनेछन् र तुच्छ गाली गलौज युक्त भाषाको हतियार बोकेर तपाईंको प्रतिरक्षामा उत्रनेछन् । हो, त्यस्तै प्रतिरक्षाको कवच लगाएको छु भन्ने भ्रमले तपाईंलाई झन्–झन् कमजोर बनाउँदै लागेको हुन्छ । मैले गल्ती गरेर के हुन्छ र ? मलाइ बचाउने लडाकु दस्ता छँदै छ नि भन्ने भ्रमले तपाईंलाई ‘जे पनि बोल्न’ उक्साएको हो भने त्यो भ्रमबाट चाँडै मुक्त हुनुपर्दछ । यो दस्ता चुनाव हारेका बेलामा तपाईंसँग हुन्न । ढुक्क हुनुस्, अहिले मौकाले जिम्मेवारी पाउँदा नगरे अर्को पालि सांसद पद पनि गुम्ने निश्चित हुन्छ ।
हुँदा हुँदा अहिले तपाईंको कार्यालयमा तपाईंकै मन्त्रालयको सचिव र तपाईंकै विभागका महानिर्देशक दुईजना आपसमा तँ तँ र म म गरेर भिडे भन्ने समाचार आयो । तिनीलाई तालुकवाला मन्त्रीकै अगाडि भिड्ने हिम्मत कताबाट आयो ? मेरो बुझाईमा उनीहरू भिड्नुको मुल कारण पनि तपाईंको अज्ञानताको मेसो पाएर नै हो । त्यसैले त तपाईंलाई गन्दैनन् र तपाईंकै अगाडि तथानाम बोल्छन् ।
त्यति मात्र हो र अहिले त मन्त्रीलाई बाइपास गरेर सचिवलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने चर्चा चल्न थालेको छ । अझ मलाई लाग्छ, तपाईंमा त्यो खुवी देखिएको भए, सरकारी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक ईश्वर पोखरेल नभएर तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो । तपाईंले कोरोना कहरमा सरकारको पूर्णरुपमा नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएपनि मन्त्रालयको ‘फस्ट मेन’ हुने मौका चाहिँ नगुमाउनु होला । सचिवले मन्त्रालय चलाए भने तपाईंलाई ‘पंगु’ भन्ने छन् आफ्ना कार्यकर्ता र ‘मतदाता’ले । यस्तो अवस्था आउन नदिनुहोला ।
आफ्नै कार्यशैलीका कारण तपाईं ‘डब्लु एचओ’को फन्दामा पनि परिसक्नु भएको रहेछ । कोरोना संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक क्रममा उपचाररत चिकित्सकलाई खबरै नगरी ‘स्वाब रिपोर्ट डब्लुएचओ’ लाई पुर्याउन हतार गर्नुभएछ । यसले टेकु अस्पतालका चिकित्सक र तपाईंहरु बीच असमझदारी छताछुल्ल भएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमित बढेको कुरा उपचार गर्ने चिकित्सकले संचारमाध्यममा आइसकेपछि मात्र थाहा पाएको भनेर गुनासो गरे । उनीहरु ‘पिपिइ’पुगेन भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । तपाईं ‘पिपिइ’ नै नबुझ्ने मन्त्री कसरी चिकित्साक्षेत्रको प्राविधिक पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सक्षम हुनुहोला र ?
चिकित्सकको मनोबल उठाउने बेलामा झन् गिराउने काममा तपाईं लाग्नुभएको देखिन्छ । यसमा पनि स्वस्थ आलोचना खेप्न नसकेर होला आलोचना माथि प्रतिक्रिया जनाउन निकै हतार गर्नुभयो। प्रतिक्रिया स्वरूप तपाइहरुले बोलेका कुरा चिकित्सकहरुका बिरुद्धमा थियो । भारतमा हेर्नुस, प्रधानमन्त्री मोदी, उनको स्वास्थ्य मन्त्रालय, डब्लुएचओ र चिकित्सकहरुको तालमेल मिलाउन सबैले एकै स्थानबाट काम गरिरहेका छन् । सबैतिरबाट तालमेल मिलाइएको छ, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उठाउन । र, आम जनतामार्फत प्रशंसा गराइएको छ, चिकित्सकको । छिमेकबाट यस्तो सकारात्मक कुरो सिक्नु पर्ने होइन र ?
त्यसमाथि कोरोना प्रभावित बिरामीहरुको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने सामाग्री अपर्झट खरिद गर्न परेको अवस्थामा साबिक मूल्य भन्दा निकै महँगो खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाएर ठुलो रकमको अपचलन हुने हल्लाले बजार तातिएको छ । अपर्झट काम गर्नु पर्दा अलिकति रकम तलमाथि हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । त्यसैले यदि त्यस्तो अवस्था आइपरेमा जनताको रगत पसिनाको पाप नलाग्ने गरि कमिसन खानुहोला । ताकि भविष्यमा आत्मग्लानी नहोस्।
नेपाली काँग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा जो तपाईंसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए । तपाईंले ४२ हजार ४ सय १३ मत ल्याउँदा शर्माले ४० हजार ५ सय ६ मत ल्याएको बिर्सन हुन्न भन्ने लागेको छ । देशभर नेकपा अत्यधिक मतले जित्दा नेकपाको गढ मानिने क्षेत्रबाट तपाईं झिनो मतले बिजयी भएको नबिर्सिनुहोला । अहिले तपाईं भन्दा एक कदम अघि बढेर शर्माले नोवल मेडिकल कलेजको अस्पताल नै कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्न दिन्छु भनेर घोषणा गरिसके । घोषणा गरेलगत्तै उनको वाहवाही बढेको छ ।
नेपाली बाम विद्यार्थी राजनीतिमा समेत तपाईं ‘फस्ट मेन’ कहिल्यै बन्न सक्नुभएन । पचासको प्रारम्भिक दशकमा अखिलको ठुलो नेता हुने दौडमा सक्नेसम्मको प्रयास गरेर विफल हुनुभएको तपाईंको इतिहास छ । अध्यक्ष बन्ने आफ्नो सपना पुरा गराउने कसरतमा झन्डै अखिल सङ्गठन नै ध्वस्त बन्न पुग्यो । अखिलमा तपाईंको यात्रा महासचिवमै सिमित भयो । तत्कालीन अखिल अध्यक्ष योगेश भट्टराईसँगको त्यो खिचातानी र त्यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तपाईँलाई सम्झना होला नै । बाम राजनीतिमा उच्च स्थानमा पुग्ने सपनाहरू यदि पुरा गर्ने हो भने अहिलेको महामारीले तपाईंलाई फेरि एक पटक ‘राष्ट्रिय हिरो’ हुने मौका दिएको छ ।
त्यसैले बोलीलाई लगाम लगाउँदै आफूलाई विज्ञ जस्तो देखाउन र ‘बुझेको र अध्ययनशील मन्त्री’का रूपमा परिचित गराउन अलिकति स्वअध्ययन तर्फ ध्यान दिने र आफ्नो वरिपरि आसेपासे सल्लाहकारको झुन्डको साटो विज्ञ सल्लाहकारको समूह परिचालन गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी हुँदै अहिलेको कोरोना कहरलाई परास्त गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु ।
durga pangani, खुलापत्र, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई
Prevनेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच : निधन हुने नेपालीमा सबै विदेश बस्ने
अलपत्र ६ सय मजदूरको उद्धारNext